China Linear Okpomọkụ nchọpụta USB NMS1001 factory na suppliers | Anbesec
Volta ọrụ: DC 24V
Ekwe Ka Voltaji Hụrụ: 16VDC-28VDC
Njikere Ugbu A: ≤ 20mA
Oti mkpu ugbu a: ≤ 30mA
Fautl Ugbu a: ≤25mA
Oke Ikwu Izu Mmiri maka Ogologo Oge Jiri: 90% -98%
IP Ntinye aka: IP66
Oti mkpu na-enye aka: 68 ℃, 88 ℃, 105 ℃, 138 ℃ na 180 ℃
1. Industrial nchekwa imewe
2. Ọdụdọ eletriki ya na imewe ike oriri dị ala
3. Nlekọta oge
4. Na-arụ ọrụ na nnyefe DC24V ma ọ bụ na-enweghị ọkọnọ DC24V
5. Oge nzaghachi ngwa ngwa
6. Ọ dịghị mkpu okpomọkụ akwụ ụgwọ mkpa
7. Kwekọrọ na ụdị ụdị ọkụ ọkụ ọ bụla
Linear okpomọkụ nchọpụta USB bụ isi akụrụngwa nke linear okpomọkụ nchọpụta usoro na bụ chebaara akụkụ nke okpomọkụ nchọpụta. NMS1001 Digital Linear Heat Detector na-enye ọrụ nyocha ngwa ngwa na-arụ ọrụ na gburugburu ebe nchekwa, Onye nchọpụta nwere ike ịmara dị ka ụdị nchọpụta dijitalụ. Ndị polymer dị n’agbata abụọ ahụ na-eme mkpọtụ ga-agbada na ọnọdụ okpomọkụ a kapịrị ọnụ na-ekwe ka ndị na-eduzi kọntaktị ahụ, mgbọ ọgbụgba ahụ ga-ebute mkpu ahụ. Onye nchoputa nwere uche na-aga n'ihu. Nghọta nke ihe nyocha ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe agaghị agbanwe mmetụta gburugburu ebe obibi na ogologo nke eriri nchọpụta na-eji. Ọ dịghị mkpa ka a gbanwee na-akwụ ụgwọ. Onye nchoputa nwere ike ịnyefe ma oti mkpu na akara ngosi iji jikwaa ogwe aka na / enweghị DC24V.
Tgbakọta abụọ nke siri ike na-eduzi nke ihe NTC na-ekpo ọkụ na-ekpuchi, nke nwere bandeeji na jaket dị elu, ebe a ka ụdị eriri Linear Heat Detection Cable na-abịa. Nọmba ọnụọgụ dị iche iche na-adabere n'ụdị ihe dịgasị iche iche nke jaket dị elu iji hụ ebe dị iche iche pụrụ iche.
Nchọpụta Okpomọkụ Ratings (Oti mkpu na ọkwa)
Otutu ihe nyocha nke otutu ihe edeputara n'okpuru di maka gburugburu di iche:
Extra dị elu
Etu ị ga - esi chota onodu okpomoku, di ka ichoputa ndi choputara ntaneti, na - ewere ihe ndi n’okpuru:
(1) Kedu ọnọdụ okpomọkụ kachasị gburugburu ebe obibi, ebe a na-eji onye na-achọpụta ihe?
Dị ka ọ dị, ọnọdụ okpomọkụ kachasị gburugburu ebe obibi kwesịrị ịdị obere karịa edepụtara n'okpuru.
Oti mkpu ọkụ
Environmental okpomọkụ (Max)
Anyị enweghị ike iburu naanị ikuku ikuku n'uche, kamakwa ọnọdụ okpomọkụ nke ngwaọrụ echekwara. Ma ọ bụghị ya, onye nchoputa ga-ebute mkpu ụgha.
(2) Chohọrọ ụdị LHD ziri ezi dịka gburugburu ngwa ahụ si dị
Eg Mgbe anyị jiri LHD kpuchido eriri ike. Max ikuku dị elu bụ 40 Celsius C, mana ọnọdụ okpomọkụ nke eriri ike adịghị ihe na-erughị 40 Celsius C, ọ bụrụ na anyị ahọrọ LHD nke 68 Celsius C mkpuchi okpomọkụ ọkwa, ụgha ụgha nwere ike ime.
Dịka e kwuru na mbụ, e nwere ọtụtụ ụdị LHD, Typedị Condị, Typedị N'èzí, Ọdịdị dị elu nke Resdị Nguzogide anddị na Explodị Mgbawa, ụdị ọ bụla nwere atụmatụ na ngwa ya. Biko họrọ ụdị nke kwesiri dika ọnọdụ a siri dị.
Njikwa Control na EOL
(Control Unit na EOL nkọwa pụrụ hụrụ na ngwaahịa 'iwebata)
Ndị ahịa ahụ nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ eletriki ndị ọzọ iji jikọọ na NMS1001. Iji mee ezigbo nkwadebe ị kwesịrị ịkwanyere ntuziaka ndị a ùgwù:
(1) Analysing ike nchebe nke equipments (input ọnụ).
Mgbe ị na-arụ ọrụ, LHD nwere ike ịgbakwunye mgbaàmà nke ngwaọrụ echekwara (eriri USB), na-eme ka ịrị elu volta ma ọ bụ mmetụta dị ugbu a na ọdụ ntinye nke ngwa njikọ.
(2) Na-enyocha ikike mgbochi EMI nke akụrụngwa (ntinye ọnụ).
N'ihi na ojiji nke LHD ogologo oge n'oge ọrụ ahụ, enwere ike ịnwe ike ma ọ bụ ugboro redio site na LHD n'onwe ya na-egbochi mgbaàmà ahụ.
(3) Tụle ihe bụ ogologo nke LHD kachasị akụrụngwa nwere ike ijikọ.
Nyocha a kwesịrị ịdabere na teknụzụ NMS1001 nke teknụzụ, nke a ga-ewebata n'ụzọ zuru ezu ma emechaa na akwụkwọ ntuziaka a.
Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ. Ndị injinia anyị ga-enye nkwado ọrụaka.
1. Ngwaahịa ngwaahịa
Ihe ndozi a dị mfe iji wụnye. A na-edozi ya na magnet siri ike, na-enweghị mkpa ịkụ ọkpọ ma ọ bụ ịkwado ọkụ ọkụ mgbe arụnyere.
2. Ngwa itinye
Ọ na-ọtụtụ-eji maka echichi na fixation nke linedị ọkụ ọkụ na-achọpụta ụdị eriri ọkụ maka ígwè ihe owuwu dị ka transformer, nnukwu mmanụ tank, USB akwa wdg
3. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu: -10 ℃ - + 50 ℃
A na-eji eriri eriri edozi eriri nchọpụta okpomọkụ na eriri na eriri ọkụ mgbe ejiri LHD kpuchido eriri ike.
2. Gbasara akporo
Ọ na-ọtụtụ-eji maka echichi na fixation nke linedị ọkụ ọkụ na-achọpụta ụdị eriri ọkụ maka ọwara eriri, eriri eriri, eriri
3. Na-arụ ọrụ okpomọkụ
A na-eji eriri naịlọn mee eriri eriri ahụ, nke enwere ike ịdaba n'okpuru 40 ℃ - + 85 ℃
Intermediate Ijikọ Ọnụ
A na-ejikarị njikọ njikọta nke etiti eme ihe dị ka nkedo ntanetị nke eriri LHD na eriri mgbaàmà. A na-etinye ya n'ọrụ mgbe eriri LHD chọrọ njikọ dị n'etiti maka ogologo. Njikọ njikọta etiti bụ 2P.
Izizi, banye njupụta magnetik n'usoro na ihe echedoro, wee kpochapụ (ma ọ bụ ịtọghe) bolts abụọ ahụ n'elu mkpuchi elu nke ihe ndozi ahụ, lee fig 1. Dezie otueriri eriri-ụdị ọkụ nchọpụta a ga-edozi ya ma tinye ya na (ma ọ bụ gafere) na uzo nke ihe ndọta. Ndien ke akpatre tọgharịa elu mkpuchi nke nfiksi na screwit elu. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ndọta magnetik ruru ọnọdụ saịtị ahụ.
Ọwara USB, Ogwe osisi USB, Sanwichi USB, USB eriri
Ebufe eriri usoro nnyefe
Njikwa, Communiclọ nkwurịta okwu, packlọ batrị
* Tụkwasị tank, sere n'elu ụlọ tank, Vetikal nchekwa tank, USB eriri, Oil tankaOke osimiri na-agwụ ike
Alllọ ọrụ na-emepụta ọla
Gbọ mmiri na ụgbọ mmiri na-ewu osisi
Hipgbọ mmiri ahu ihe nchara
Ime ụlọ nchịkwa
Mmeghachi omume arịa, Storge tank
Ọwa ndị njem, Hangar, nkwakọba, akpa carousel
Transzọ ụgbọ oloko
Metro, Okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, Ọwara
Nrụ ọrụ arụmọrụ nke ịchọputa okpomọkụ
Okpu Okpu Okpu
Ihe ruru 45 ℃
Ihe ruru 70 ℃
Ihe ruru 105 ℃
Ihe ruru 60 ℃
Ihe ruru 75 ℃
Ihe ruru 93 ℃
Ihe ruru 121 ℃
Na-anabata ndị ọzọ
Oge zara (s)
Oke nke eletriki & arụ ọrụ metụtara ya
Ihe nke isi na-eduzi
Dayameta nke isi kondokto
Nguzogide nke cores
Eduzi (abụọ-cours, 25 ℃)
Kesaara ikike (25 ℃)
Ihe ekesara (25 ℃)
7.6 /h / m
Mgbochi mkpuchi nke cores
Ihe mkpuchi n'etiti mkpuchi na jaket elu
Nke gara aga: NMS1001-L Control Unit
Osote: Nnukwu nrụgide mmiri na-emenyụ ọkụ （2.1）